အခမဲ့စီးပွားရေး | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အခမဲ့စီးပွားရေး
ကုမ္ပဏီများမှထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Linux ကို software ကိုသုံးပြီးပိုက်ဆံတန်ချိန်ချွေတာနေကြ. open source software, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြန့်ဝေ, ဆာဗာများ powering ဖြစ်ပါတယ်, desktops တွေနဲ့, နှင့် laptop, နေ့ရက်တိုင်းအရေးကြီးသောဟာ့ဒ်ဝဲအပြေးနှင့်အစွမ်းထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပို့.
သင်၏လုပ်ငန်း Card များကိုအတူအဘယျသို့ပွုကွဖို့မဟုတ်!
အဘယ်ကြောင့်အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ Big စီးပွားရေးအဓိပ်ပာ
စီးပွားရေးက Web Hosting – အဆိုပါယုံကြည်စိတ်ချရသော Difference
Advertising ကြော်ငြာ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, website design and hosting all takeatoll on your business' budget. An important part of all of these aspects is your business' logo design. Don't worry because there areafew options available to you that will help reduce the financial strain on your budget. There areavariety of free business logo design services that will help you designabusiness logo if you purchase your other advertising and marketing products through them.
အခမဲ့စီးပွားရေး Card များကိုတကယ်ပဲအခမဲ့ Are?
ခေါ်ဆိုမှုစင်တာ : Big စီးပွားရေးလုပ်ဖို့မင်္ဂလာပါဆိုရမည်!
ခေါ်ဆိုမှုစင်တာစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ကြီးထွားစီးပွားရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသစ်တခုအသက်အရွယ်၏အစအချက်ပြလိုက်ခြင်း. သင်တို့အဘို့ဖုန်းကိုဖြေဆိုရန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားဘဲလျက်အစဉ်အမြဲမျှော်လင့်သင်တိုးမြှင့်ပုံရိပ်နှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင် clients များပေးသည်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံနှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်လာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခစင်တာများများအတွက်ဝယ်လိုအားတိုးပွါး.
7 MLM တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရညံ့ဖျင်းသောအကြောင်းရင်း
အားလုံးမှားအကြောင်းပြချက်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု MLM type ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြဘေးအန္တရာယ်များအတွက်လက်ခံသူများဖြစ်ပါသည်. အကြောင်းကိုခုနစျပါးတစ် MLM အခွင့်အလမ်းအတွက်စာရင်းသွင်းများအတွက်အဆိုးဆုံးအကြောင်းရင်းများထဲက Find, နှင့်အတိအကျအဘယ်ကြောင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း၏ဤကြင်နာဒါအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးက Business Plan ပြင်ဆင်နေ၏အရေးပါမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ all-in-one folder ကိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတွေ: ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့
တစ်ရုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်သင့်လျော်ရုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ထိရောက်မှုအရေးကြီးသောစေသည်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်သည်ရှိမရှိ, တင်ပြချက်များအဘို့အပုံနှိပ်ဖိုလ်ဒါကုန်ကျထိရောက်သောထုံးစံ၌လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်. သို့သော်, အများဆုံးကုမ္ပဏီများသည်အမြောက်အမြားစျေးနှုန်းဖြတ်တောက်စေ, အရာမကြာခဏဘတ်ဂျက်အပေါ်နေဖို့လျော့နည်းနိုင်အောင်ဝယ်ယူသေးငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိပြီး. ကိုယ်အဘို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေနေထုတ်ကုန်များ၏အသေးစားပြေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုငါ့အောင်မြင်မှုဖို့အရေးကြီးတယ်.
ခုနစျပါးကိုအော့ဖ်လိုင်း Viral စျေးကွက်အကြံပြုချက်များ
မကြာသေးမီကငါသည်သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်မှ traffic ကိုမောင်းထုတ်ဖို့ပိုရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအော့ဖ်လိုင်းသုံးပြီးကြောင်းအော့ဖ်လိုင်းစျေးကွက် '' အကြောင်းဖိုရမ်ဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်. ငါနေဆဲငါတီဗီစီးပွားဖြစ်အတွက် URL ကိုမြင်ဘယ်လောက်အေးမြငါထင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှတ်မိနိုင်. အဆိုပါအော့ဖ်လိုင်းကမ္ဘာကြီးပထဝီ၏သတ်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်၏အနည်းဆုံးစျေးကြီးပုံစံများပထဝီအနေအထားအရဘောင်းဖြစ်သွားကြသည်, အချို့သောဆိုက်များအတွက်စိန်ခေါ်နိုင်သည့်. အဆိုပါဖိုရမ်အပေါ်တစ်စုံတစ်ယောက်က offli ကပြောပါတယ် ...
ကအခမဲ့အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့ကြာသောအရာကိုအထဲက Find. သင်သည်သင်၏ခြေလှမ်းစီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလှည့်ပတ်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်နှင့်သင့်ပရိသတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်. ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Credit Card ကိုအတူအောင်မြင်ကူညီပါ
သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်များအများအပြားအခက်အခဲတစ်ခုမှာ startup အဆင့်စဉ်အတွင်းမြို့တော်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှုဖြစ်ပါသည်. တိုင်းပြည်အနှံ့အသေးစားအထူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားသောကြီးထွားမှုနှင့်အတူ, ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဤအသစ်အဖောက်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ကူညီအထူးအစီအစဉ်များကိုဒီဇိုင်းစတင်နေကြသည်. မြို့တော်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ပင်သူတို့အားအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်, သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရက်ဒစ်ကဒ်အစီအစဉ်များနှင့်အတူဆက်စပ်အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးအမြတ်, နေဆဲသင်သည် Mor ယှဉ်ပြိုင်ကူညီရန်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ် ...
Linux ကိုဆော့ဝဲ Cool ဖြစ်ပါတယ်, Linux ကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖြစ်ပါသည်, Linux ကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျရောက်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂုရု၏အဆိုအရ, ဘရိုင်ယန် Tracy, '' ခေါင်းဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြိုင်အဆိုင်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ကျရှုံးအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးအပါဆုံးတစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည်, လှုပ်ရှားထကြွသော, အစာရှောင်ခြင်း-ရွေ့လျားစီးပွားရေးမှာ။ ' နေဆဲမဟုတ်ယုံကြည်တယ်? အမေရိကန်ဘဏ်များ၏ Jessie Hagen ကလေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံ., ဤနေရာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျရှုံးအဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း: ဤအ key ကိုစစ်မှန်သော၏ '' ညံ့ဖျင်းသောစီးပွားရေးစီမံကိန်း '' ညံ့ဖျင်းသောဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်း '' ညံ့ဖျင်းသောစျေးကွက် '' ညံ့ဖျင်းသောစီမံခန့်ခွဲမှုသင့်လျော်လျှောက်လွှာ ...
Computer ကို Monitor ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းထိပ်တန်းအကြှနျုပျ၏အားလပ်ရက်လက်ဆောင်ပေးမယ်စာရင်း
အားလုံးအဘို့အ silicone လက်ကောက်!
အေး Calling မှသင့်ရဲ့ကြောက်လန့်ရပ်တန့်ဖို့ကိုဘယ်လို –3အအေးခေါ်ဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ခြေလှမ်းများ!
Advertising ကြော်ငြာနှင့်မြှင့်တင်ရေး၏အကွိမျမြားစှာ Levels
သင့်ရဲ့ Customer များနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပါနိုင်သလားဒါကတစ်ခု Optimization
3 တစ်ဦးတင်ပြအတွက်ပြည်သူ့ Make အဆိုးဆုံးအမှား
marketing ကိုဘတ်ဂျက် 101
တွန်းလှန်ပွဲမှတ်ပုံတင်: ယုံကြည်ကိုးစားမှုအကြောင်း object ကိုကျော်လွှားရန်ကဘယ်လို
လေကြောင်း dispatch ယောဘသည်ဆိုဒ်များ
8 dynamic စျေ​​းကွက်သိကောင်းစရာများ
စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့အ WEBconference applications များ
အဖုံးပေးစာ, Resumes and the Job Hunter’What’s it All About?
Affiliate Marketing ကိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေး Advertise ဖို့အများစုဟာကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်